घर अमेरिकी स्टेर्स मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण कहानी को एक रक्षात्मक प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ उपनाम द्वारा ज्ञात प्रस्तुत गर्दछ; "बीओच"। हाम्रो मार्कोस रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातासम्म ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणले प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र अफ-पिच मार्कोज रोजो तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ
हो, हरेकले उनीहरूको रक्षात्मक क्षमताहरूबारे जान्दछ तर केहीले हाम्रो मार्कोस रोजोको जैवलाई धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, चल्न सुरु गरौं।
मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
[पूरा नाम] फैस्टिनो मार्कोस अलबर्टो रोजो अर्जुन अर्जेन्टिना ला लाटामा मा 20 को 1990th मा जन्मिएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा र मार्को रोजो आफ्नो पिता कार्लिना रोजो जन्मनुभएको थियो। उनी ला ला टाटामा एल ट्रानेन्फोमा बस्थे, ब्यूनस आयर्स (अर्जेण्टीनाको राजधानी) बाट एक निर्दोष शहर 40 माइल। यो यसको अपमानजनक आपराधिक गिरोह र यसको फुटबल-मायालु बासिन्दाहरूको लागि एक शहर हो।
ला प्लाताको गैर-अपराध प्रोन क्षेत्रमा आफ्नो क्यारियर किकस्टार्ट गर्नको लागि एक बोलीमा, मार्सोसको अभिभावकले एस्टुडियन्ट्स एल एलमा लिएका थिए जहाँ उनी युवा युवा फुटबलरको रूपमा दर्ता भएको थियो। तल डिफेंडरको अचम्मको अभिलेख गरिएको फुटेज भनेको बच्चाको रूपमा सुन्दर खेलमा पहिलो चरण हो।
जस्तै मार्क्सो रोजोले यसो भन्छ ... "मैले फुटबल खेल्न थालेपछि मेरो बुबासँग कार छैन। उहाँ गरिब हुनुहुन्थ्यो र मेरो प्रशिक्षण हाम्रो घरको नजिक थिएन। त्यसैले हामी साइकल चलाउन चाहन्छौं। हामी दुबै लामो समयसम्म साइकल चलाउँथ्यौं। मेरो बुबाले सडकमा चीजहरू बेच्न प्रयोग गर्थे र यात्रामा यात्रा गर्न घर फर्किहाल्थे। यो एकदम लामो यात्रा थियो र उहाँले आफ्नो साइकल चलाउनुहुँदा म धेरै न्यानो हुनेछु! " रोजोले आफ्नो घरबाट उनीहरूको प्रशिक्षण मैदानमा 20 किलोमिटर वरिपरि एक गोल यात्रा प्रशिक्षण लिए चक्र गर्न थालेको थियो। एक पेशेवर फुटबलर बनने सपना देखाउन उनले धेरै बलिदान गरे।
"म उनको जुनून देख्न सक्छु," रोजो एसएनआर (उनको बुबा) भने। "म उसलाई देख्न सक्छु र म उहाँलाई देख्न सक्दिन किनकि उसले हरेक बल पछि जान्छ। उहाँ सधैं आफ्नो उमेरका अन्य केटाहरूसँग भिन्न हुनुहुन्थ्यो। " क्लब (Estudiantes) युवा को प्रशिक्षक गब्रिएल सैन मिलनले पनि मार्कोस 'क्षमतालाई मान्यता दिए र उनको पहिलो व्यावसायिक क्लबमा आफ्नो प्रतिभा विकास गर्न मद्दत गरे। "टेक्निकल, उनी एक राम्रो खेलाडी थिए," सान मिलानले भने। उहाँले जारी राख्नुभयो ..."उहाँसँग राम्रो गुणहरू र एक राम्रो आधार थियो। तर त्यो चीज जुनसुकै बारेमा तिनीहरु बाहिर निस्किन्थ्यो त्यो सधैं राम्रो गर्न चाहन्थे। एक खेलाडीको रूपमा मार्कोस एलोसोको विकास अविश्वसनीय थियो। जब उहाँ 18 वा 19 थिए, उहाँले भौतिक विकास गर्न थाल्नुभयो।
आफ्नो किशोर वर्ष को अन्त मा, मार्कस पहिले देखि नै स्थानीय पक्ष, Estudiantes, संग अर्जेंटीना पहिलो डिवीजन मा खेलिरहेको थियो। मार्कोसको किशोरीको लडाइँ लडाइँमा डरलाग्दो थियो र तिनले प्रारम्भिक विद्यालय छोडेर छोडे। त्यहाँ धेरै चोरीहरू, लडाइँ र समेत मृत्युहरू छन्। फुटबल उनको उद्धारकर्ता थियो। त्यो एक सानो केटा थियो किनभने उहाँले सधैं फुटबल गर्नुभयो। सधैं फुटबल, दिन र रात। धेरै, धेरै चोटि मार्सोहरू झगड़ाहरू हुनेछन्। उनी धेरै रिस उठ्छन् र धेरै संघर्षहरू छन्। यो सडकमा आदर्श छ। तपाईं बलियो हुनुपर्दछ।
कोप लिबर्टडेकोरहरू आफ्नो विगतका किशोर वर्षहरूमा जीने पछि, मार्कोस स्पाटार्को मास्को र त्यसपछि, स्पोर्टिङ लिस्बनमा गए। उनले साँच्चै ब्राजिलमा 2014 विश्व कप फाइनलहरूमा आफ्नो अंक बनायो किनभने अर्जेन्टिनाले जर्मनीलाई छोटो छोटो अन्तिम स्थानमा फाइनलमा पुग्यो। यसले कल बाट कल गर्यो म्यान युनाइटेड। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
रोजो इयुनेशिया लुसार्डोसँग विवाह भएको छ, लिस्बनमा आधारित एक अधोवस्त्र मोडेल। जब दुवै खेल स्पोर्टिंग सीपी मा थियो तब दुवै प्रेमीहरू एक-अर्कासँग प्रेममा परे। त्यसपछि यूजीनिया लिम्बुन आधारित अधोवस्त्र फर्ममा दमा डे कोपस भनिन्छ। उनी साँच्चै, इनामयुक्त सुन्दरताको महिला हुन्।
यस जोडीले एक छोरीलाई मोरना भनिन्छ (जसलाई उनीहरूले अनौठो रूपमा 'थप' भनिन्)।
अद्भुत मोडेल प्रेमिकाको साथ रोजोको जीवन युगेरिया लूसोर्डो एक अर्जेन्टिनाको कडा अप्ठ्यारोबाट एक गरीब barrio मा रहेको छ।
इफेयर: डिसेम्बर 2014 मा, रोजो एक नाइट क्लब मा मिलेर एक महिला संग एक सम्बन्ध थियो। उनले तिनलाई ब्ल्याममेलको आरोप लगाए र पत्रिकामा आफ्नो नाम प्रकाशित समाचारहरू रोक्न एक निन्दा गरे। चिन्ताको कारणले गर्दा उनको नाममा निषेध अप्रिल 2015 मा हटाइएको थियो जुन अन्य फुटबलरहरुले यो सम्बन्धको शङ्कामा शंका गर्न सक्दछन्, तर यो यो फोटोको रिलीज रोक्नको लागि बनी रहन्छ।
मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फुटबलले एलिस ट्युनफोफको कठिन गल्लीहरूमा जीवनबाट मार्कोसलाई बचाउनुभयो र तिनको परिवारलाई गरिबीबाट हटाउनुभयो। तल मार्कोस र उनको माम, कार्लिनाको फोटो हो जुन उनको धन र सफलताको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी हो।
मार्कोस रोजो स्नैआर, उपनाम 'टाती' उपनाम दिइएको थियो, एल क्रुसका पूर्व शौकिया खेलाडी थिए र उनको छोरालाई जवान युगमा खेलमा धकेल्न मद्दत गर्यो। तिनको बुबाले एक दिनको सडकमा कोने चोर्रो विक्रेताको रूपमा मात्र पाउन्ड 2.50 गरे, जो मार्कोस र तिनका चार भाइबहिनीहरू - फ्रेंको र तीन बहिनीहरू - नोएलिया, माइक्रोअले, र सोलका खाना खाएको थियो। तलको बचपन दिनको दौडान मार्कोस र तिनका तीन भाइबहिनीहरूको तस्बिर हो।
मार्क्सो रोजोको प्रसिद्धि र भाग्यले आफ्नो परिवारलाई हत्याको डरमा घर फर्किदिएको छ। अर्जेंटीनामा अपराधीहरू पहिले नै आफ्नो बुबालाई पिटेका छन् र बन्दुकलाई आफ्नी आमाको टाउकोमा राखे। आफ्नो बचपनको घरमा आइपुगेको एक विशेष दलका सदस्यले उनको नौ वर्षीय बहिनी सोल र गोल्सनको उमेरमा मार्ने धम्की दिए।
उनीहरूले आफ्नो लाखौं पाउन्डमा आफ्नो हात प्राप्त गर्न आशा गर्थे जसले प्रायः आफ्ना प्रियजनहरूलाई फिर्ता रमाइलो पार्छ। यो आयो जब उनको असाधारण कमाई प्रसिद्ध रूपमा पुरानो ट्रेफर्ड क्लीनर द्वारा सार्वजनिक गरे। मार्कोसको भाइ फ्रेंको र बहन नोलियाले परिवारको डरबारे बोल्पालाई बोलेका छन् कि उनीहरूले माक्ससको सफलताको शिकारको शिकार छन्।
द सनसँग एक विशेष साक्षात्कारमा, उनीहरूले बताए कि उसले कसरी अगस्त Utd मा म्यान Utd मार्फत, परिवारले आफ्नो ढोकाको जवाफ दिए र सुरक्षा ब्वाइफ गरेको छ। ला प्लातामा उनको घरबाट बोल्दै, नोएलियाले भने: "हामी सधैँ डरलाग्दो छौं। तिनीहरूले हामीलाई मार्कसको कारण लक्षित गर्छन्। तिनीहरू घर जान्छन्, सबैलाई थाहा छ। हामीले प्रत्येक सावधानी लिनुपर्छ र हामी
कसैको ढोकाको जवाफ नदिनुहोस्। हामीले हाम्रा सबै विन्डोहरूमा पट्टी राख्नुपर्छ - अगाडि, फर्केर र ढोका माथि। यो मार्कको रोजो परिवारको खतरनाक छ। तर हामी छोड्नेछौं किनभने यो हाम्रो घर हो। " उनी आफ्नो आमा र बुबाको घरमा गिरोह हमला गरेर यति उत्साहित भए कि उनले उनको ट्विटर खातामा हिंसात्मक ओझेलको पछि देखाउँछन्। त्यसोभए, एक अपरिचित मार्कोसले पुलिसलाई अपराधीहरू फेला पारेका थिए
कहिल्यै गरेनन् - र आक्रमणकारीहरूलाई आक्रमण गर्न ट्विटरमा लिनुभयो।
उनीहरूको परिवार आफ्नो घरबाट टाढा गए तापनि उनी अझै पनि अर्को शिकार बने
उनीहरूलाई नगद उचालेर नयाँ प्लान। यो नोटमा उल्लेखनीय छ कि जब गर्मीमा ग्रीसको मार्क्स सामेल भयो, त्यसो गर्दा उनको गृहनगरमा आक्रमणको आरोप लगाउने कामका कारण काम-परमिटको कारण सम्झौता भयो।
मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - हराउने स्थिति व्यवस्थापन गर्दै
फ्रेंको उनको भाइले यसो भने: "उहाँ सधैँ वेरोन हुन चाहनुहुन्थ्यो र घरमा फुटबल खेलिरहेको बेला उनी बन्न चाहानुहुन्छ। मार्सोस प्रायः एक कोठा मा आफ्नो कोठा मा एक कोठा मा बस्छन् यदि उनको एक महत्वपूर्ण खेल मा हराएको छ भने टीम। अर्जुन अर्जेन्टिनाले 2014 विश्व कप फाइनलमा जर्मनीलाई हराएपछि, मार्कसले एक हप्ताको लागि कसैलाई बोल्दैनन् वा हेर्न सक्दैनन्। उहाँ धेरै दिनसम्म निराश हुन सक्नुहुन्छ। उहाँ नाराज रहनुहुन्छ। यस समयमा, उहाँलाई एक्लै छोड्नु पर्दछ र त्यसपछि शान्त आउँनेछ। विश्वकप पछि, उनले उनलाई लगभग5दिन लगाए। उहाँले आफ्नो फोन बन्द र उहाँले कसैलाई बोल्नुहुन्न। तर यो मैनचेस्टर युनाइटेडमा भएको छैन, अझै सम्म। "
मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - यस विवाद
एक पटकको मार्कसले उनको इन्स्टाग्राम पेजमा औषधी मालिक पाब्लो एस्बबारको तस्वीर पोस्ट गरेपछि एक विवादको कारण बनायो: "केवल ती व्यक्तिहरू जो मेरो साथ भोकाउन गए र मेरो द्वारा खडा हुँदा मेरो जीवनमा केहि समय खराब समय बित्यो मेरो तालिकामा।"
मार्कस, जब सामना गर्नु पर्यो भने पोष्ट एक ठूलो सम्झौता थिएन र थपियो: "मैले चित्र राखे किनभने मैले बोल्ने र शब्दहरू मन पराउँथे।" Peharbs, एचई देखेको छ एस्कोबारको जीवन कथा टिभीमा र वाक्यांशहरू मनपर्छ। यसको मतलब छैन। वास्तवमा, उहाँले के गर्नुभयो समर्थन गर्दछ। तथापि, उनको सफलताको बावजूद, मार्कसले आफ्नो जरा बिर्सनुपरेको छैन र निश्चित छ कि उनको सबै परिवारले उनीहरूको सफलताबाट लाभ उठाएका छन्।
त्यो हुन सकेन भने उसले जीवनमा आफ्नो जुनून पछ्याएको छ भने 'गायन'। मार्कस एक फुटबल चाहिएको थियो यदि उनी फुटबलर हुन सक्दैनन्। वास्तवमा, उहाँले सबै पक्षमा, सबै पारिवारिक घटनाहरु गाई र नाटक गर्नुहुन्छ।
मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
मार्कोस रोजो उनको व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषता छ।
मार्कोस रोजोको शक्ति: उहाँ दयालु, कलात्मक, सहज, सज्जन, बुद्धिमानी र धेरै संगीत हुनुहुन्छ (फुटबल अघि उनको पहिलो प्रतिभा)।
मार्कस रोजोको कमजोरीहरू: हानि व्यवस्थापन गर्न असमर्थ।
कुन मार्कोजो रोजियो मनपर्छ: एक्लै हुनु, सुत्न, संगीत, रोमान्स, दृश्य मिडिया र स्विमिंग।
जो मार्कस रोजो नापसंद: Mediocres, आलोचना गरिरहेको छ, अतीत फिर्ता फिर्ता उहाँलाई हिंसा र कुनै पनि प्रकारको क्रूरता।
मार्कस धेरै मित्रवत छ, त्यसैले तिनीहरू प्रायः आफैले धेरै फरक मान्छेको कम्पनीमा भेट्टाउँछन्। उहाँ पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ र सधैं अरूलाई सहयोग गर्न इच्छुक छ, पछाडी केहि पनि प्राप्त गर्न आशा बिना।
मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -खाने काटा
मार्कस रोजो रोस्स्टोव संग मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूरोपा लीग टाई को एक प्रमुख कुरा को बिंदु मा एक प्रदान गरे - पिच मा केले खाने को द्वारा!
थियो Jose Mourinhoकुल मिलाएर प्रतिस्पर्धात्मक 2-1 को क्वार्टर-फाइनलमा अग्रगामी जुआन मटा दोश्रो आधा स्ट्राइक। फ्यान को दुवै सेट रहस्यमय छोड दिए जब एशले यंग को खेल को मैदान मा खाने को लागि रोजो को लागि एक खुली केला को हेरफेर देख रहेको थियो।
Jose Mourinho स्वीकार गर्यो कि असामान्य दृष्टि थकान को परिणाम को रूप मा आयो, एक कारक जो अब र सीजन को अन्त को बीच बढती भूमिका निभाने को संभावना हो।
Mourinho भन्नुभयो बीटी खेल: "मार्कस धेरै चोटि थकित थिए। उहाँ जान्नुहुन्छ उहाँका शरीरलाई केही कुरा चाहिन्छ। उनले केवल केलाको लागि सोधे। केला अवस्था सबैमा मजेदार छैन, हामीले एक खेलाडिको भौतिक अवस्थाको आदर गर्नुपर्छ। "
मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -टाटु
Rojo ले पहिले नै अंग्रेजी बोल्न सक्दछन्, पढ्ने उनको पाटो टैटू अनुसार 'गर्व' र 'महिमा'।
उहाँसँग धेरै अन्य ट्याटोहरू छन्:
मार्क्सो रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -रबना क्लीसन
तर यो 'रबना'विश्व कप मा क्लाइन्स मा उनको आफ्नो दाहिने पैदल अधिक आत्मविश्वास छैन। मार्क लरेन्सनले मद्दतपूर्वक "उनीहरूलाई गधा देखेका थिए" भनी सुझाव दिएका छन् भने उसले गल्ती गर्यो भने।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मार्कोस रोजो बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।